Nubia Z20 ga - enwe ike idekọ vidiyo na 8K | Gam akporosis
Yesnyaahụ ekpughere ụbọchị ngosipụta nke Nubia Z20. Ọ bụ ihe ekwentị ọzọ dị elu na-esote akara ndị China, nke ga-arụ ọrụ na ụbọchị ole na ole. Ruo ugbu a enwere nkọwa ole na ole gbasara ngwaọrụ ahụ, ọ bụ ezie na onye isi ụlọ ọrụ ahụ na-ekpughe eziokwu na-adọrọ mmasị banyere ya.
A atụmatụ na otú nwere nnọọ obere edidu ke ekwentị ahịa. Ya mere o doro anya na o kwere nkwa inye aka Nubia Z20 a ka ọ nwee ike ịiche onwe ya na ekwentị ndị ọzọ na ahịa dị ugbu a. Ebe ọ ga-enwe ike idekọ vidiyo na 8K.
Nke a ekwuwo site n'aka onye isi ụlọ ọrụ na N'ajụjụ ọnụ, ya mere, ọ ga-abụ otu n'ime atụmatụ ndị kachasị mkpa na Nubia Z20 a. Tụkwasị na nke a, ọ dị ka ị nwere ike ịdekọ ihe karịrị 15 fps, ọ bụ ezie na ọ nweghị nkọwa ọzọ e nyere n'oge ahụ. Ọ na-aghọ otu n'ime ekwentị ole na ole na ahịa inwe atụmatụ a.
Ọ bụ ezie na Ọ bụghị oge mbụ na ika na-eji ọrụ a. Ebe ọ bụ na Red Magic 3 ọ nwere ohere ịdekọ na 8K. Ya mere, ụlọ ọrụ ahụ chọrọ ka ekwentị ya bụrụ ihe akaebe na mpaghara a, na-enye ha ọrụ nke nnukwu mmasị na ọtụtụ ndị ọrụ.
Na August 8, a ga-egosi Nubia Z20 n'ihu ọha. N'oge a amaghị ọtụtụ ihe banyere ekwentị, ewezuga ntule banyere onye nhazi iji. Mana anyị ga-ahụ ma nkọwa gbasara ekwentị na-awaba na ụbọchị ndị a gara aga, nke na-enye anyị ohere ịnwe echiche doro anya karị.
Ọ ga-abụ akara nke atọ kachasị elu nke afọ a. Na ụdị nke ha hapụrụ anyị, ha gosipụtara ikike ha nwere maka ihe ọhụrụ, yabụ enwere mmasị ịmara ihe ha hapụrụ anyị na Nubia Z20 a. N'ihe na-erughị izu abụọ anyị ga-enwe obi abụọ banyere ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Nubia Z20 ga - enwe ike idekọ vidiyo na 8K
Huawei Mate X adịghị njikere ịmalite
Mediatek Helio G90 processor nhazi ugbua nwere ụbọchị ịhapụ